July 18, 2020 - Chothale
ओलि-प्रचण्डले चोचो मिलाएपछि गर्जिए नेपाल, दिए भाडभैलो हुने अभिव्यक्ति !
July 18, 2020 chothale
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवादमा ट्विस्ट देखा परेको छ । बहुमत सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने तयारी गरेपछि उनले ‘अर्ली महाधिवेशन’को प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि सहमत गराउनुभएको छ । स्रोतका अनुसार ओलीसँगको पटकपटकको एक्लाएक्लै (वान अन वान) वार्तापछि प्रचण्ड अर्ली महाधिवेशनमा जान राजी हुनुभएको हो । “आजको बैठकमा दुवै अध्यक्ष (ओली र प्रचण्डले) अर्ली महाधिवेशनमा जाऔं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो,” ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बाह्रखरीसँग भन्नुभयो “पार्टीको संकट निवारणका लागि यो नै विकल्प थियो । एकताले स्वीकारेका अध्यक्षहरूले महाधिवेशनको बृहत फोरम…
uncategorizedकेपी ओली, नेकपा, प्रचण्डLeaveacomment
प्रचण्डको लालकिल्लाबाट नेकपाका शक्तिशाली नेता कांग्रेसमा प्रवेश !
July 18, 2020 July 18, 2020 chothale
भरतपुर । नेकपाले जनतालाई धोका दिएको भन्दै चितवनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता युवराज गिरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ । पार्टी कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठले गिरीलाई सदस्यता दिनुभएको हो । भरतपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २३, कृष्ण चोक निवासी गिरी सिद्धार्थ माध्यामिक विद्यालय केरुङ्गाका पूर्व प्रधानाध्यापक समेत रहनुभएको थियो । उहाँले नेकपाबाट देश चल्न नसक्ने भन्दै काँग्रेसमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेकपाका दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, मेयर रेणु दाहालबाट चितवनका विकास हुन नसक्ने बताउनसभयो । चितवन कांग्रेसका सभापति श्रेष्ठले गिरीसहितका नेकपाका थुप्रै…
समाचारकेपी ओली, नेकपा, प्रचण्डLeaveacomment
आखिर किन टुट्छ कसैको प्रेम ?
काठमान्डौँ । सम्बन्ध नतोड्ने भनेरै पनि महिला र पुरुष विवाह बन्धनमा बाँधिने गर्दछन् । तर समयसँगै हामी परिवर्तन हुन्छौँ र हाम्रो सम्बन्ध पनि । सम्बन्ध स्थिर नै हुँदैन । परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नसके मात्र मानिसहरुको सम्बन्ध सुमधुर हुने गर्दछ । यदि यसलाई नबुझेमा पुरै सम्बन्ध नै टुट्न सक्छ । विवाह केवल दुई व्यक्तिसँग जीवन बिताउने मात्र नभई एक अर्काबिच सुमधुर सम्बन्ध बाँध्ने मौका पनि हो । तर आजकाल वैवाहिक बन्धनको उमेर कम भइरहेको छ र सम्बन्ध बिच्छेदको घटनाहरु निकै सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसको पछाडि केहि ठोस् कारणहरु पनि रहेका छन्…
जीवनशैलीविवाहLeaveacomment
July 18, 2020 July 29, 2020 chothale
दुव्लो भएका युवा युवती विवाह पछि मोटाएका हामीले धेरै देखेका छौं । अझ साथी भाईहरुबीच त बिहेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ । विवाहपछि किन मोटाउछन् त पातला मानिस यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । फेमिली सिस्टम एण्ड हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार विवाह पछि थुप्रै महिला र पुरुषको तौल तेज रुपमा बढ्ने गर्दछ । यस्तै एक अन्य अनुसन्धानका अनुसार विवाहको ५ वर्ष्भित्र करिब ८२ प्रतिशत जोडीको तौल ५ देखि १० किलो बढ्ने गर्दछ । विशेषज्ञका अनुसार तौल बढ्नुमा हाम्रो परिवर्तित जीवनशैली र बडी चेन्ज नै हो । विवाह…
जीवनशैली, मनोरन्जन, राेचकविवाहLeaveacomment
को’रोना पछि नेपालमा भित्रियो फेरी अर्को ख,तरनाक रोग, एक जनाको मृ’त्यु !
पत्रकार बानियाँको रहस्यमय मृ’त्युको सत्यतथ्य बाहिर ल्याऊन, कांग्रेसको माग !
प्रधानसेनापतीले प्रधानमन्त्रीसँग रक्षामन्त्रीको यस्तो पो’ल खोले ! अब के होला ?
के यो’निमा वी’र्य झा’र्दा मो’टाइन्छ ? यस्तो छ रहस्य !
August 11, 2020 chothale 0
आजभोली आफ्नै परिवारमा पनि महिलाहरु सु’र’क्षि’त रहेका छैनन । बाबुले आफ्नै छोरि ब’ला’त्का’र गरेको भन्ने घ’ट’नाहरु सुनिदै पढिदै आएका छन । यो घ’ट’ना भारतको हो। भारतमा आफ्नो श्रीमान नभएको मौ’का छो’पी यी युवती आफ्नै पुरानो ब्वा’इ’फ्रे’न्ड स’ङ्ग म’स्ती गरिरहेकी हुन्छिन \_। जुन भिडियो अहिले सार्वजनिक भएको छ ।...
August 8, 2020 chothale 0
वी’र्य र शु’क्रकीट फरक कुरा हुन् । वी’र्यमै अ’ण्डकोषमा बनेका शु’क्रकीट पनि हुन्छन् । महिलाको डि’म्बसँग शु’क्रकीटको मिलन...
August 7, 2020 chothale 0
काठमान्डौँ । हाम्रो समाजमा अझै पनि यौ’नका कुरा खो’लेर गर्ने चलन छैन । त्यसैमाथि युवतीहरु त...
August 5, 2020 chothale 0
युवतीहरु विवाहपछि मोटाउनुको खास कारण यस्तो छ !
दुव्लो भएका युवा युवती विवाह पछि मोटाएका हामीले धेरै देखेका छौं । अझ साथी भाईहरुबीच त...
अस्ट्रेलियामा चक्कु लिएर लुटेरा लखेट्ने नेपाली, पवित्रा कार्की घटनाबारे के भन्छिन् ?
July 17, 2020 chothale 0
बहिनीलाई मृ’त्युको मुखवाट जोगाउने ६ वर्षका यि बालकको विश्वभरी प्रसंसा, सम्मान स्वरुप एक सेयर गरौँ !
काठमान्डौ । आफ्नो ४ वर्षकी बहिनीलाई मृ’त्युको मुखवाट...
July 10, 2020 chothale 0
एउटा इमान्दार केटा चाहियो, म संगै जापान जाने अनि संगै बस्ने काम गर्ने ! तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस् ।
काठमान्डौ । म काठमान्डौमा बेचलर रनिङमा पढ्दैछु ।...
July 7, 2020 chothale 0
जिब्रो चिप्लिएर समस्यामा परेका नेपाली सेलिब्रेटीहरु !
नेपाली फिल्म क्षेत्रका धेरै जसो कलाकार अभिनयलाई लिएर...